दया, सौगात र मिरुना स्टारर् ‘कबड्डी–४’ले एक सातामै कमायो १५ करोड! | खप्तड अनलाईन
दया, सौगात र मिरुना स्टारर् ‘कबड्डी–४’ले एक सातामै कमायो १५ करोड!
June 04, 10:58
काठमाडौं । अभिनेता दयाहाङ राई, मिरुना मगर र सौगात मल्ल स्टारर् ‘कबड्डी–४ः द फाइनल म्याच’ले बक्स अफिसमा उत्कृष्ट कमाइ गरिरहेको छ । फिल्मका वितरकका अनुसार ‘कबड्डी–४’ले एक सातामा नै १५ करोडको बक्स अफिस कलेक्शन गर्न सफल भएको छ । योसँगै एक सातामा सर्वाधिक कलेक्शन गर्ने फिल्मको समेत रेकर्ड बनाएको छ ।
गत शुक्रबारदेखि दर्शकमाझ प्रदर्शनमा आएको ‘कबड्डी–४’ले पहिलो दिन नै तीन करोड बढीको बक्स अफिस कलेक्शन गरेको थियो । फिल्मले सर्वाधिक अग्रिम टिकट बुकिङ हुने पहिलो फिल्म, घरेलु बक्स अफिसमा सर्वाधिक ओपनर तथा अत्याधिक शो पाउने पहिलो फिल्मलगायतका रेकर्ड राखिसकेको छ ।
अहिलेसम्मकै छोटो समयमा धेरै कलेक्शन गर्ने फिल्म बनेको ‘कबड्डी–४’ले अझैँ पनि दर्शकहरुको राम्रो साथ पाइरहेको छ । निर्माण पक्षका अनुसार फिल्मले प्रदर्शन अगाडि नै डिजिटल र ओभरसिज राइट्सबाट लगानी उठाइसकेको छ ।
फिल्ममा दयाहाङ राई, सौगात मल्ल, मिरुना मगर, बुद्धि तामाङ, विजय बराल, गौमाया गुरुङ, कमलमणि नेपाल, पुष्कर गुरुङ, कविता आले, जयनन्द लामा, प्रकाश घिमिरे, माओत्से गुरुङ, उपेन्द्र सुब्बालगायत कलाकारहरु मुख्य भूमिका छन् । फिल्मलाई रामबाबु गुरुङले निर्देशन गरेका हुन् ।
धनगढीमा एक हजारका ३८ थान नक्कली नोट फेला, ३ महिला पक्राउ
June 04, 6:12
धनगढी, २१ जेठ । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा ३८ थान नक्कली नोटसहित ३ जना पक्राउ परेका छन्।… विस्तृतमा
सेतो बाघ भोड्का धनगढी बजारमा
June 04, 5:48
धनगढी २१ जेठ । सेतो बाघ’ ब्रान्डमा मदिरा भोड्का सुदूरपश्चिमको बजारमा ल्याइएको छ । मदिरा उत्पादक… विस्तृतमा
एकता प्रगतिशील सहकारीलाई उत्कृष्ट सहकारी व्यवसाय पुरस्कार
April 04, 1:09
कैलाली – कैलालीको गोदावरी नगरपालिका – ८ मा रहेको एकता प्रगतिशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई… विस्तृतमा
एशियन लाईफको पाँच दिने पुनताजकिय तालिम सम्पन्न
April 03, 9:20
मोहन पनेरु धनगढी,२० चैत्र / एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी डोटी शाखाको पाँच दिने अभिकर्ता… विस्तृतमा